SomaliaReport: Odayaasha Cayr oo Buriyey Heshiiskii Al-Shabaab
SomaliBurcad BadeedAl ShabaabDowladdaColaadSaxaafadSamafalUN-ta
SomaliaHeadlines	Somali:Al Shabaab
By AWEYS CADDE 11/04/2011Tobaneeye Odayaal kasoo jeeda jilibka Cayr ee Hawiye ayaa Arabacadii la kulmay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Nabadsugida, Cabdisamad Macallim Maxamed Sheekh Xasan Faarah, oo isla qabiilka kasoo jeeda, iyagoo buriyey inay heshiis la gaareen kooxda Islaamiga xagjirka ee al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa tallaadadii sheegatay inay Cayr ku heshiiyeen soo afjarrida khilaafka u dhexeeya labada dhinac, ka fullin sharciga Islaamiga ah degaanadooda, iyo cafinta xubnaha qabiilkooda ee taageersan maleeshiyaadka dowladda. Isagoo la hadlay Somalia Report shirka kadib, midka mid ah odayaasha caanka ah, Caaqil Xasan Cilmi Yaxye, ayaa sheegay in xiriirka kaliya ay la lahaayeen al-Shabaab uu ahaa colaad.
“Dhamaam odayaasha meeshan ku sugan way kasoo horjeedaan al-Shabaab, yaa saxiixay heshiiskaas? Waxay werareen degmooyinkayagii iyo tuulooyinkayagii oo dhan todoba goor, waxay ugaarsadeen in kor udhaaftay 30 ganacsatada Cayr, waxay madaxa ka jareen dilleena todoba masuul oo Cayr ah, iyo jiilal aan la xisaabi Karin, haddaba side baan heshiis kula galaynaa,” ayuu yiri.
Xaashi Cali Kulane, oo ka mid ah odayaasha al-Shabaab sheegatay inay la heshiiyeen, ayaa yiri waa warbixin been ah.
“Waan la yaabay markaan markaan magacayga ka maqlay warfaafinta,” ayuu u sheegay Somalia Report. “Sidoo kale, waxay yiraahdeen nabad-doon Saylac iyo Xasan Dhingif ayaa saxiixay heshiishka, maanta ayey ka shirayeen siday al-Shabaab dadka uga ciribtiri lahaayeen.” Qaar ka mid ah Cayr ayaa masuuliyiin al-Shabaab ah, oo ka mid yahay Sheekh xasan Daahir Aweys, Khaliif Cabdalle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ee al-Shabaab, Sheekh Maxamed Xasan Cumar (Abuu Cabdiraxmaan).
Qabiilka Cayr wuxuu ka mid yahay kuwa ugu badan uguna xoog badan qabiilada Soomaaliya ee kasoo horjeeda al-Shabaab. Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee gobalada dhexe ee Soomaaliya waa Cayr. Waxay degaan gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Gadoon, Mareergur, Guri Ceel iyo Dhuusamareeb. Tweet